शरिर बिदेशमा भए पनि मन त नेपालमै रहन्छ । नेपालको माया धेरै लाग्छ— सुसि किङ रामकाजी गोसाइ -
समय सान्दर्भिक	काठमाण्डाैं	वैशाख २९, २०७८
काठमाडौँ । बिगत १९ वर्षदेखि जर्मनीमा आफ्नो ब्यबसाय संचालन गरि रहनु भएका सुसी ब्यबसायी सुसी किंङ रामकाजी गोसाईसंग समय सान्दर्भिक अनलाईनले गरिएको समसामयिक कुराकानी प्रस्तुत गरिएको छ…….. ।
नेपाल आइसकेपछि के मा ब्यस्त हुनुहुन्छ ?
युवाहरुलाई दक्ष तालिम र स्वरोजगार दिनका लागि सुसिको शिप मुलक तालिम दिनमै ब्यस्त भएको छु ।
नेपाल आइसकेपछि सुसिको ट्रेनिङ दिनु पर्छ भन्ने सोच कसरी आयो ?
मान्छेको आआफनो सोच हुन्छ त्यस सोचकै कारण मैले नेपालमा सुसीको ट्रेनिङ सचालन गर्नु पर्छ जस्तो लागेर यो ट्रेनिङ संचालन गरेको हो । आफूसँग भएको सिप जति बाड्यो त्यति नै बढ्ने हुन्छ । त्यस अनुरुप मैले नेपालमा सुसिको ब्याबसायिताका लागि ट्रेनिङ दिएको हो ।
सुसि ट्रेनिङ दिनुको मुख्य उदेश्य के हो ?
मुख्य उदेश्य त नेपालका युवाहरुलाई दक्ष ट्रेनिङ दिएर आत्मनिरभर बनाउने नै हो । आजका बेरोजगार युवा भोलि रोजगार होस् भन्ने चाहना पनि हो र नेपालमै स्वरोजगार मार्फत आफनो जीवन संचालन गर्नुका साथै बिदेशमा गएर पनि आफनो दक्षता अनुरुपको काम गर्ने सक्ने अवस्थाको सृजना गर्नु नै मुख्य उदेश्य रहेको छ ।
बिदेशमा जस्तै नेपालमा पनि सुसिले आफनो बजार लिन सक्ने सम्भावना कतिको छ ?
सुसि खानाको परिकार अहिले बिश्व भरि नै फैलिदै आएको छ । जुन जापानबाट शुरुवात भएको हो । बिश्व बजारमा यस्को लोकप्रियता र सबै मानिसहरको रुचिको खाना भएकाले नेपालमा पनि आफनो बजार छिट्टै लिन्छ भन्नेमा म बिश्वस्त छु ।
सुसि ट्रेनिङका लागि के कस्को साथ र सहयोग रहेको छ ?
कर्ण पोजिटिभ ट्रर्स र ग्लोवल सुसि मिलेर नेपालमा यस्को ट्रेनिङ संचालन गरेका थियौ । जसमा नेपालका युवाहरुले हामीले सोचेको भन्दा पनि बढीले टे«निङमा सहभागिता जनाएका थिए ।
तपाईलाई सुसि किङ भनेर पनि चिनिन्छ यसवारे थोरै प्रस्टाइ दिनुस् ?
म जर्मनमा हुदाँ त्यहाँका मानिसहरुले धेरै प्रकारका सुसि खाइ सकेका रहेछन् । त्यस मध्येका पनि हाम्रो रेष्टुरेन्टको माना सुसि धेरै मिठो रहेछ जुन कुरा उनीहरुले जर्मनको पत्रिकाका समेत सुसि किङ भनेर लेखिदियो । यसरी नै एक कान दुई कान हुदैँ प्रचार भएर सुसि किङ नामले परिचित भएको हो ।
मम, चाउमिन र पिज्जा भने जस्तै सुसि त्यति परिचित खाना होइन , सुसि कस्तो परिकारको खाना हो ?
सुसि भनेको जापानिज परिकार हो । मम, चाउमिनमा धेरै फ्याट हुन्छ तर सुसिमा फ्याट हुदैन । यस्मा काचो माछा भेजिटेवलहरु हुन्छ । यो खाना धेरै हेल्दि भएकोले पनि जापानिजहरु धेरै बर्ष बाचेका हुन् । बिश्व भरि सुसिको मार्केट बढनुको मुख्य कारण नै हेल्दि फुड भएकाले नै हो ।
नेपालमा सुसिको बजार विस्तार गर्ने सोच राख्नु भएको छ कि छैन ?
नेपालमा पनि यस्को बजार बिस्तार गर्ने सोच बनाएर नै आएको हो । जहाँबाट सकिन्छ त्यहि बाट गरौँ । नेपालमा पनि केहि गरौँ भन्ने उदेश्य बोकेरर नै नेपाल आएको हो । नेपाली बजारमा पनि सुसिको चाडै नै ब्यवसाय अगाडि बढाउने तयारीमा नै छौँ ।
सुसिलाई अगाडि बढाउन नेपालमा स्थानिय, प्रदेश र केन्द्र स्तरीय कुनै किसिमको अवधारणहरु बनाउनु भएको छ ?
यस्तो त छैन तर पनि मैले बिगत ३ बर्ष अघि नै ग्लोवल सुसि एकेडेमि दर्ता गरेर यस्को काम शुरु गरि सकेको छु । यस बर्ष देखि टे«निङ दिन पनि थाल्यौ र नेपालमा सुसिको मार्केट कस्तो छ भनेर कर्ण पोजेटिभ ट्रस र ग्लोवल सुसि मिलेर रिसर्च पनि गरि राखेका छौ ।
सुसि खाना खादा स्वास्थ्यका कस्तो सहयोग पुर्याउछ ?
सुसि भनेको यस्तो खाना हो जस्मा फ्याट हुदैँन । फ्याट हाम्रो शरिरलाई हानिकारक छ । जस्तै बदेल , खसीको मासुमा धेरै फ्याट हुन्छ धेरै फ्याट भयो भने शरिरले पचाउन सक्दैन यसले रोग निम्त्याउँछ । माछाको फ्याटले चै हाम्रो शरिरमा रहेको फ्याटलाई काट्छ । त्यसकारण पनि जापानिजहरु एकदमै स्लीम हेल्दी र धेरै समय बाच्ने कारण पनि यहि हौँ ।
सुसि खानाको उदगम स्थल र शुरुवाति जापानबाटै भएको हो ?
शुरुवाती जापानबाटै भएको हो । चाईना र कोरियामा पनि खान्छन । अहिले आएर सुसिको बजार बिश्व भरि नै भइ सकेको छ ।
सुसिको ट्रेनिङ लिन नेपाली युवाहरुले कस्तो प्रकृया पुरा गर्नु पर्छ ?
खासै त्यस्तो प्रकृया पुरा गर्नु पर्दैन हामीले अनलाइनमा राखेको फर्म भरे पछि त्यसकै आधारमा उनीहरुले गरेको अनुभवको आधारमा छनौट गछौँ । यस्का लागि हामीले ग्लोवल सुसि एकेडेमी र कर्ण पोजेटिभ ट्रस मिलेर नेपालमा यस्को टेनिङ संचालन गरेका छौ्रँ ।
कर्ण पोजिटिभ ट्रससँग कसरी आबद्ध हुनु भयो ?
म सकारात्मक सोचको अभियन्ता हुँ । मानिस सकारात्मक हुनु पर्दछ यदि सकारात्मक भएन भने आफनो जीवन सहज रुपमा अगाडि बढाउन सकिदैन त्यसैले पनि हामी हरेक क्षण सकारात्मक हुन जरुरी देख्छु । चाईनामा एउटा उखान छ कसैलाई दक्ष र राम्रो बनाउनु छ भने उसलाई माछा होइन बल्छी दिनु भने झै हामीले पनि कसैलाई दक्ष बनाउनु छ भने उसलाई सिप दिएर दक्ष बनाउने हो । हिजोका कामदार नै भोलीको साहु बनाउने नै हाम्रो मुख्य उदेश्य हो ।
सरकारले गर्नु पर्ने काम तपाई आफैँले गर्नु भएको छ, यसमा सरकारको साथ र सहयोग रहेको छ ?
यस्तो कार्यक्रमहरु सरकारले गरेको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो । नेपालमा धेरै पर्यटकीय स्थल छन् जुन जस्तै काठमाडौ, ललितपुर, भक्तपुर, पोखरा, दोलखा जहाँ मानिसलाई सधै दालभात मात्र खाना रुचदैन त्यस्को अलवा यस्ता खानाहरुले पनि राम्रै स्थान पाएका हुन्छन् । पहिले मान्छेहरुले पेटका लागि खान्थे भने अहिले आँखा, कान, नाकले खाने गर्दछन् । जुन सुसि परिकार खानेहरुले यस कुराको प्रमाण सिद्ध गरिदिएका छन् ।
आफनो ब्यवसायसँगै तपाई समाजसेवा पनि लागि रहनु भएको छ । समाजसेवाका लागि कसरी समय मिलाउनु हुन्छ ?
समय भनेको आफैँले मिलाउने हो । अमेरिकाको राष्ट्रपति बिहान कुकुर लिएर मनिङवाकमा हिडेका हुन्छ । हामीले पनि समय आफनो कामका लागि कति दिने समाजसेवाका लागि कति दिने भनेर म्यानेज गर्ने हो ।
आफनो जन्न्मथलो नेपाल छोडेर कर्मथलो जर्मन जानु भएको कति बर्ष भयो ?
म नेपाल छोडेर जर्मन आएको १९ बर्ष भयो । म जर्मनमा रहे पनि मेरो मन चै नेपालमै छ । किनभने मलाई नेपालको असाध्यै माया लाग्छ । पहिला मेरो पुल्चोकमा दुईटा रेष्टुरेन्ट थियो । द्धन्दकालमा टुरिसहरु थिएन ब्यापार थिएन । अप्ठयारा थिए । बाध्य भएर बिदेश गएको हु । बिदेशमा पनि त्यति सजिलो छैन दुख सुख गरेर बसेको छु । सुसि मार्टस कोर्सका लागि अमेरिका गए, त्यसपछि जापान, इजरायल युरोप पुगे ।
नेपाल छोडेर बिदेश गए पछि के फाईदा लिनु भयो र के घुमाउनु भयो ?
घुमाउनु त खासै केहि घुमाएको छैन हामी नाङगै जन्मेर आएका हौ केहि लिएर आएका छैनौ । अमेरिमा जापान जर्मनी लगायत देशमा गएर सिप सिकेर आफनै देशका युवाहरुलाई फ्रि स्किल डेभलोमेन्ट टे«निङ दिदै आएको छु ।
नेपालमा बस्नु र जर्मनमा बस्नुको फरक के छ ?
फरक धेरै छन् , हरेक कुराको सुविधा हुन्छ । जर्मनीमा काम भएन भने सरकारले भत्ता दिन्छ । नेपालमा यस्तो निति छैन । कोही काम सिक्न खाजे सरकारले लगानी गरिदिन्छ तर नेपालमा यस्तो छैन । नेपालमा पनि यस्तै यस्तै निति होस कोहि पनि बिदेश जान नपरोस् । शिक्षा, स्वास्थ्य निशुल्क गरोस् यहि नै चाहना हो आफनो देश प्रति । अहिले हाम्रो देशको दुखको कुरा के हो भने युवाहरु जति पनि छन् सबै बिदेशकै लागि जन्मेको जस्तो मात्र भएको छ ।
बिदेशको बिकास र निति हेरेर नेपाल सरकारलाई कस्तो सल्लाह सुझाव दिन चाहन्नु हुन्छ ?
सबभन्दा त कुनै पनि देशमा पारदर्शिता बिना बिकास सम्भव नै छैन जर्मनीमा हरेक कुराको पारदर्शिता हुन्छ । नियम कानूनमा चल्नु प¥यो । जवकी हाम्रो देशमा पारदर्शिता नै छैन , नियम कानून नै मान्दैन भने हाम्रो देश कसरी बिकास हुन्छ । मैले सुनेको अनुसार नेपालमा साना साना ब्यवसायहरुले ट्याक्स तिर्नु पर्ने ठूलाठूला ब्यवसाय गर्नेहरुले ट्याक्स नै तिर्नु नपर्ने पत्रपत्रिकामा आइरहने कुरा हो यो यसरी देश बिकास कसरी सम्भव होला । जर्मनीमा सरकारले सानो होस् या ठूलो सबैलाई बराबरी ट्याक्स लिएर जनतालाई सेवा दिन्छ । नेपालमा पनि यस्तै पारदर्शिता होस् कानून सबैलाई बराबरी होस् भन्न चाहन्छु ।
नेपाल आई सकेपछि कतिको ब्यस्त हुनु भयो ?
नेपाल आउनुको मुख्य उदेश्य भनेकै आफूमा भएको सिप युवाहरुलाई सिकाउनु हो । नेपाली युवाहरुलाई बिदेश पलायन हुनुबाट रोक्न केहि गरौँ भनेर फ्रि स्किल डेभलोमेन्ट टे«निङ दिएको छु । जुन टे«निङ लिएर नेपालमै ब्यवसाय गर्न सकुन या कामै गरेता पनि राम्रो तलवमा काम गर्न सकुन भन्ने चाहनाले नै नेपाल आएको हुँ ।
सुसि प्रति युवाहरुको लगाव र प्रतिक्रिया कस्तो पाउनु भयो ?
नेपालमा सुसिप्रति युवाहरुको लगाव मैले सोचेको भन्दा पनि धेरै राम्रो पाएको छु । भक्तपुरमा मैले टे«निङ दिदा खेरी युवाहरुको आकर्षण देखेर म आफै अच्मित भएको छु । उनीहरुको मेहनत हसिलो मुहार एक प्रकारको उत्साह देखेर मलाई साह्रै खुशी लागेको छ । सुसि खानाको आइटम कति प्रकारका छन् ?
यो मरिमा चाकु खुवा आदी राखेर बनाउछौ त्यसै गरि सुसिमा पनि माछाका सयौ परिकार हुन्छ यस्मा कचिला, टेम्पुरा, स्पागल धेरै भेजिटेवल आइटम राखेर साथै माछाका सयौ परिकारलाई मरमसला राखेर बनाउन सकिन्छ ।
अन्त्यका युवा वर्गलाई सुसि मार्फत कस्तो सन्देश दिन चाहनु हुन्छ ?
युवा बर्गलाई मैले सर्बप्रथम सुसि मार्पmत राम्रो टेनिङ लिनु भन्छु साथै आफू सक्षम बन्नु र अरुलाई पनि सक्षम बनाउनु भन्छु । सकारात्मक हुनु जस्तै सकारात्मक बन्नलाई कर्ण शाक्य सरले लेख्नु भएको किताव सोच, खोज, गर अनि म सक्छु भन्ने किताव पठेर जानेर आफु सक्षम र आत्म निर्भर हुन सबै युवालाई सन्देश दिन चाहन्छु ।
भीमेश्वर नगरपालिकाले नगरका जनतालाई विशेष स्वास्थ्य सुविधाको घोषणा, नगर प्रमुखको जनप्रिय कार्य
✍ रवीन्द्र श्रेष्ठ, हाल क्यानडा । दोलखाका लोकप्रिय नेता...